Archive du 20180321
Famatsiam-bola mampiahiahy Naiditra am-ponja i Sarkozy
Nampidirina am-ponja vonjimaika nanomboka omaly talata 20 martsa noho ny ahiahy amin’ny fisiana famatsiam-bola avy any Libya nampiasainy nandritra ny fampielezan-keviny ny taona 2007 ny filoha Frantsay teo aloha Atoa Nicolas Sarkozy.
Vola hanambazana depiote Tafakatra 30 tapitrisa ariary ?
Isaky ny misy zavatra hatao, toy ny fandaniana volavolan-dalàna lehibe iankinan’ny aim-pirenena eny amin’ny antenimiera Tsimbazaza, dia tsy miala ao ny resaka fanambazana ara-bola.
Hery Rajaonarimampianina “Mbola mianatra demokrasia isika”
Nisokatra omaly talata 20 martsa tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fahenina amin'ny seminera ifanakalozan'ny RECEF (réseau des Compétences Electorales Francophones).
Taratasin’i Jean Veloma lava ooo !
Manao ahoana ry Jean a a ! Ary mitsoatsoaka ! Sa rainitetaka ? Toa sady tsy mahasahy manasazy an’ireo mifehy tenda manga mantsy no mety tsy hahovoka akory amin’ny propavandy.
Vidin’entana amin’ny ariary 14 taona aty aoriana, tsy mbola zatra ny maro
Efa tamin’ny 7 jolay 2003 no nivoaka ilay lalàna nanova ny fiantsoana ny vola miasa eto Madagasikara ho ariary.
Hetsika la grande braderie de Madagascar Hotanterahina ny 27 ka hatramin’ny 31 martsa ho avy izao
Hotanterahina ny 27 ka hatramin’ny 31 martsa ho avy izao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar karakarain’ny Madavision, mialoha ny fetin’ny paska.
Tarika Ny Ainga Iray ihany fa tsy mivaky
Tonga nampahafantatra ny seho voalohany amin’ity taona ity tetsy amin’ny Espace Telozoro Andrefanambohijanahary ny tarika Ny Ainga omaly.
Sarimihetsika Gisa Mainty 2018 Hanomezana lesona ny mpanao politika
Sambany no hisy sarimihetsika hivoaka hanome lesona ny mpanao politika eto amintsika. “Gisa Mainty 2018” no anarana hampitondraina azy io, izay hiparitaka manerana ny Nosy manomboka ny 26 martsa ho avy izao,
Lolona mpanasa lamba 8.000 Ar isan-kerinandro ny karama raisiny
10 taona nanasana lamba i Lolona ankehitriny, renim-pianakaviana iray monina eny Avaradrano eny. Hatreto, tsy mbola tena nisitraka ny tsiron’ity asa ity ny tenany, raha araka ny fanazavany fa aretina aza no azo, indrindra ny ririnina.
Mpivarotra kafe mitety tanàna Mikarama 2.000 ar isan’andro
Ankizy avy any ambanivohitr’Ambatolampy any i André kely. Roa taona izao no nahatongavany teto an-drenivohitra mba hikarama ka ireny asa fivarotana kafe ranony mandehandeha ireny no ataony.